ဘူမိဗလအတုလျတေဇ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဘူမိဘော အဒူလျာဒက် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၉ ဇွန် ၁၉၄၆ - ၁၃ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆
၅ ​မေ ၁၉၅၀
အာနန္ဒာ မဟီဒလ် (ရာမ၈)
ဝချိရာလောင်ကွန်း (ရာမ ၁၀)
Sangad Chaloryu (ယာယီ)
Meechai Ruchuphan (ယာယီ)
Chitchai Wannasathit (ယာယီ)
Sonthi Boonyaratglin (ယာယီ)
Chaovarat Chanweerakul (ယာယီ)
Niwatthamrong Boonsongpaisan (ယာယီ)
(1927-12-05)၅ ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၉၂၇
အာဘန်​တောင် ​ဆေးရုံ၊ ကမ်းဘ​ရေ့ချ်၊ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
၁၃ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၆(2016-10-13) (အသက် ၈၈)
သီရိရတ်ချ်ချ်​ဆေးရုံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
၃၀ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇
ဝတ်ဘိုဝိိုန်နိဝေတ် ဝိဟာရ၊ ဗြး နခိုန်
သီရိခေတ် (m. ၁၉၅၀)
ဘူမိဗလ်အတုလျဒေက်ျ (အင်္ဂလိပ်: Bhumibol Adulyadej; ထိုင်း: ภูมิพลอดุลยเดช; အသံထွက် [pʰuː.mí.pʰon ʔa.dun.ja.dèːt] ( နားဆင်); ၅ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၂၇ – ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ကျကရီမင်းဆက်၏ နဝမမြောက် ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ကာ ရာမမင်းဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ၁၉၄၆ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် နန်းတက်ခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ကမ္ဘာ့နန်းသက်အရှည်ကြာဆုံး မင်းတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပြီး နန်းသက်မှာ နှစ် ၇၀ နှင့် ၁၂၆ ရက် ဖြစ်သည်။သူ၏ လက်ထက်တွင် ဝန်ကြီးချုပ် အ​ယောက်၃၀ တာဝန်ထမ်း​ဆောင်ခဲ့သည်။
​ဖော့ဘ် မဂ္ဂဇင်း မှတွက်ချက်ထားသည့် ဘုရင်ကြီး၏ အလုံးစုံပိုင်ဆိုင်မှုမှာ  – ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ​အ​မေရိကန်​ဒေါ်လာ ၃၀ဘီလီယံရှိပြီး ထိုမဂ္ဂဇင်း၏ အချမ်းသာဆုံး ​တော်ဝင်မျိုးနွယ်များစာရင်းတွင် ၂၀၀၈ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ခုနှစ်အထိ ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်ခဲ့သည်။
၂၀၀၆ခုနှစ် ​နောက်ပိုင်းတွင် ကျန်းမာ​ရေး အားနည်းလာပြီး သီရိရာချ်ဆေးရုံတွင် ကြာမြင့်စွာ အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်​နေ့တွင် ထို​ဆေးရုံတွင်ပင် နတ်ပြည်စံခဲ့သည်။သူသည် ​ယေဘုယျအားဖြင့် ထိုင်းပြည်သူများ၏ ​လေးစားကြည်ညိုခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။တစ်နှစ်အကြာ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ​တော်ဝင်အခမ်းအနားဖြင့် မီးသဂြိုဟ်ခဲ့သည်။သူ့ကို သားဖြစ်သူ ဝချိရာလောင်ကွန်းက ဆက်ခံခဲ့သည်။
၃ ဆက်ခံခြင်းနှင့် ထိမ်းမြားခြင်း
၄ ဘိသိတ်ခံယူခြင်းနှင့် ဘွဲ့​တော်များ
၁၉၅၂ခုနှစ်က ၁၉၃၂ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေပြင်ဆင်ချက်ကို လက်မှတ်​ရေးထိုးထား​သော ဘူမိဗလာဘုရင်၏ လက်မှတ်။​ရေးထိုးထားသည်မှာ "သောမ္ဒေ့က်ျ ဗြးပရုမရာခ်ျဓိရာခ်ျ မဟာဘူမိဗလ် အဒုလျဒေက်ျ သျမ်မိန်ဒရဓိရာခ်ျ ပရုမနာထ်ဗလ်ဖိတ်"ဖြစ်သည်။
ဘူမိဗလ်ဘုရင်၏ အ​မေရိကန်တွင် ​မွေးစာရင်း၌ "ဘေဘီ သိုင်ကလာ"ဟုဖော်ပြသည်။သူ၏ မိဘများသည် ထိုစဉ်က ကျကရီနန်းဆက်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ ညီ​တော် ဗြးဇာဓိပက (ရာမ၇ဘုရင်)နှင့် တိုင်ပင်ကာ မင်္ဂလာနာမည် ​ရွေးချယ်ကြသည်။ ရာမ၇ဘုရင်က သင်္သကရိုက်ဘာသာမှ ယူထား​သော ဘူမိဗလ်အဒုလျဒေက်ျ (Bhumibol Adulyadej (ဒေဝနာဂရီ: भूमिबल अतुल्यतेज, IAST: Bhūmibala Atulyateja)) ဘူမိ (Bhūmi (भूमि)); အဓိပ္ပါယ်မှာ '​မြေ'၊ ဗလ (Bala (बल)); အဓိပ္ပါယ်မှာ 'ခွန်အား သို့မဟုတ် 'စွမ်းအား'၊ အဒုလျ (Atulya (अतुल्य));အဓိပ္ပါယ်မှာ 'တုနှိုင်း၍မရ​သော'၊ဒေ့ကျ်
(Tej (तेज));အဓိပ္ပါယ်မှာ 'စွမ်းအား' ဖြစ်သည်။ထို့​ကြောင့် "ဘူမိဗလ်အဒုလျဒေကျ်" (Bhūmibala Atulyateja, or Bhumibol Adulyadej)ကို ထိုင်းဘာသာတွင် ​မြေပြင်၏ခွန်အား၊အနှိုင်းမဲ့စွမ်းအားဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဘုရင်ကြီးသည် ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသနယ်ပယ်တွင် မိုးတုကို စတင်တီထွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော (Father of Royal Rainmaking) မိုးလေဝသပညာရှင်ကြီးဖြစ်သည်။ 
ဘူမိဗလဘုရင် (အလယ်)ကို သူ၏ မယ်​တော်၊အစ်မ​တော်နှင့် အစ်ကို​တော်တို့နှင့်အတူ​တွေ့ရစဉ်
ဘူမိဗလကို ၁၉၂၇ခုနှစ် ​ဒီဇင်ဘာ၅ရက်​နေ့တွင် အ​မေရိကန်နိုင်ငံ၊ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ ကမ်းဘရစ်ချ်မြိ့ရှိ အာဘန်​​တောင်​ဆေးရုံတွင် ​မွေးဖွားခဲ့သည်။ဆုန်ခလာမင်းသား မဟီတလ အတုလျေတေဇနှင့် သာမန်မိဖုရား စရင်နာဂရင်ဒါ တို့မှ ဖွားမြင်သည်။သူ၏ခမည်း​တော်မှာ ဟားဗက်တက္ကသိုလ်တွင် ​ဆေးပညာဆိုင်ရာ သင်ယူ​နေချိန် ဖြစ်သည်။သူ့တွင် အစ်မ​တော် မင်းသမီးဂလီယယ်နီ ဗာဒါနာနှင့် အစ်ကို​တော် မင်းသားအာနန္ဒာ မဟီတလတို့ရှိသည်။
ဖခင်ဖြစ်သူမှာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ​အောင်လက်မှတ်ရရှိခဲ့၍ ၁၉၂၈တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ ၁၉၂၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ​ကျောက်ကပ်​ရောဂါဖြင့် ဖခင်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ထိုအချိန်တွင် ဘူမိဗလမင်းသားမှာ ၂နှစ်ပင် မပြည့်​သေး​ပေ။သူသည် မတာ​ဒေ​​ကျောင်းတွင် ခဏတာတက်​ရောက်ခဲ့သည်။၁၉၃၂​တော်လှန်​ရေးအပြီး၊ ၁၉၃၃ခုနှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ ပြန်သွားခဲ့ကြသည်။ထို​နေရာတွင် သူသည် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။၁၉၃၄ခုနှစ်တွင် သူ၏ ပထမဆုံးကင်မရာကို ရရှိခဲ့ပြီး ဘဝတစ်​လျှောက်လုံး ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကို စိတ်အားထက်သန်​စေခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ် ​ပြောင်းလဲပြီး​နောက် ၁၉၃၅ခုနှစ်တွင် ဆက်ခံမည့်သူမရှိ​သည့် ဦးရီး​​တော် ပြဇာဓိပက ရာထူးစွန့်လွှတ်လိုက်ရာ ကိုးနှစ်အရွယ် သူ၏အစ်ကို​တော်ဖြစ်သူ အာနန္ဒာ မဟီ​ဒေါ နန်းတက်ခဲ့သည်။ သို့​​သော် မိသားစုမှာ ဆွစ်ဇာလန်တွင်သာ ​နေထိုင်​နေခဲ့သည်။တိုင်း​ရေးပြည်ရာများကို ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဘုရင်ခံ​​ကောင်စီမှ စီမံသည်။သူတို့သည် ၁၉၃၈ခုနှစ်တွင် ၂လမျှသာ အိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။၁၉၄၂ခုနှစ်တွင် ဘူမိဗလမင်းသားမှာ ဂျက်စ်ဂီတ ဝါသနာအိုးဖြစ်လာကာ ဆက်ဆိုဟွန်းကို တီးခတ်ခဲ့ပြီး သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို စွဲလန်းစွာ မြတ်နိုးခဲ့သည်။သူသည် အထက်တန်း ဒီပလိုမာ (ဘက်ကူ​လော်ရီယာ) ကို လူ​ဆန်မြို့ရှိ Gymnase Classique Cantonalမှ ပြင်သစ်စာ​ပေ၊လက်တင်နှင့် ဂရိဘာသာတို့ဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။၁၉၄၅တွင် သိပ္ပံဘာသာရပ်များကို လူဆန်တက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက်သင်ကြားခဲ့သည်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် မိသားစုမှာ အိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ 
အစ်ကို​​တော်ဘုရင် အာနန္ဒာ မဟီ​ဒေါမှာ ၁၉၄၆ခုနှစ် ဇွန်လ၉ရက်​နေ့တွင် ​သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် နတ်ရွာစံသွားခဲ့သည်။​အစိုးရ၏ ကနဦး​ဖော်ပြချက်တွင် ကိုယ်​တော်တိုင် မ​တော်တဆ ပစ်မိသည်ဟု​ဖော်ပြခဲ့သည်။စုံစမ်းစစ်​ဆေး​ရေး ​ကော်မတီကမူ ဤသည်မှာ မဖြစ်နိုင်​ကြောင်း​ပြောခဲ့သည်။ နန်း​တော်၏ ကျွန်၂​ယောက်မှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်​ကြောင်းထင်ရှား၍ ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရသည်။တတိယ​မြောက် ဖြစ်နိုင်​​ချေမှာ ညီအစ်ကို၂ယောက်မှာ သူတို့၏ ပစ္စတိုများဖြင့် ကစား​နေကြစဉ် ဘူမိဗလမင်းသားမှ မ​တော်တဆပစ်မိခြင်းဖြစ်သည်။သို့​သော် ထိုအချက်ကို မည်သည့်အခါမှ တရားဝင် ထည့်မစဉ်းစားရ​ပေ။
ဘူမိဗလမင်းသားမှာ သူ၏အစ်ကို​တော်ကို ဆက်ခံခဲ့ကာ ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် ရက်၁၀၀မပြီးဆုံးမီတွင် ဆွစ်ဇာလန်သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။သူ့အ​နေဖြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတွင် စိတ်ဝင်စားခဲ့​သော်လည်း နိုင်ငံ​တော်၏​ခေါင်း​ဆောင်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ရ​တော့မည်ဖြစ်၍ သူ၏ အဓိကဘာသာရပ်ကို ဥပ​ဒေနှင့် နိုင်ငံ​ရေးသိပ္ပံတို့တွင် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။သူ၏ ဦးရီး​တော် ရန်ဆစ် ပရာရောဆစ်မင်းသား (ချိုင်နတ်မင်းသား)မှာ ဘုရင်ခံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘူမိဗလဘုရင်၏ အမည်ဖြင့် ချိုင်နတ်မင်းသားမှာ ၁၉၄၂ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၁၉၄၉ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေကိုလည်း လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ ထိုဥပ​ဒေမှာ ၁၉၃၂​တော်လှန်​ရေးအပြီး ​​ပျောက်ဆုံးသွား​သော ဘုရင်၏ အာဏာများကို ပြန်လည် မြှင့်တင်​ပေး​သော ဥပ​ဒေဖြစ်သည်။ ၁၉၄၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆိုင်ယမ်အစိုးရမှ နတ်ရွာစံဘုရင် အာနန္ဒါမဟီ​ဒေါ၏ အသုဘအခမ်းအနားအတွက် ​ဒေါ်လာ​ထောင်​ပေါင်းများစွာ ခွဲ​ဝေ​ပေးခဲ့သည်။၁၉၄၇အာဏာသိမ်းမှု​နောက်ပိုင်း မငြိမ်မသက်မှုများ​ကြောင့် ဘိသိတ်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရသည်။နန်းတွင်း​ဗေဒင်ပညာရှင်များက ၁၉၄၉ခုနှစ် မတ်လ၂ရက်ကို အခါ​တော်​ပေးပြီး ​ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
ဆွစ်ဇာလန်တွင် ​ကျောင်းတက်​နေစဉ် ဘူမိဗလမှာ ပြင်သစ်သို့ မကြာခဏ အလည်သွား​လေ့ရှိသည်။ပြင်သစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး၏ သမီးဖြစ်သူ သီရိ​ခေတ်နှင့် ပထမဆုံး ​တွေ့ဆုံမိခဲ့သည်။သီရိ​ခေတ်မှာ ချူလာ​လောင်ကွန်းဘုရင်၏ မြစ်​တော်စပ်သူလည်းဖြစ်သည်။ထိုစဉ်က သီရိ​ခေတ်မှာ အသက်၁၅နှစ်သာရှိ​သေးပြီး စန္ဒယား​ဖျော်​ဖြေပွဲအတွက် ​လေ့ကျင့်​နေသည်။
၁၉၄၈ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာ၄ရက်​နေ့တွင် ဘုရင်ဘူမိဗလမှာ ဖီယယတ်တိုပိုလီနိုကားဖြင့် လူဆန်မြို့အပြင်ဘက် ၁၀ကီလိုမီတာအကွာ ဂျီနီဗာ-လူဆန်လမ်း​ပေါ်တွင် ဘရိတ်အုပ်လိုက်​သော ထရပ်ကား၏ ​နောက်ပိုင်းကို တိုက်မိ​လေသည်။​နောက်​ကျောပိုင်း၊မျက်နာနှင့် မျက်လုံးတွင် အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့သည်။ ထို့​ကြောင့် မီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း အခမ်းအနားနှင့် ဘိသိတ်ပွဲကို ထပ်မံ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြန်သည်။ လူဆန်မြို့တွင် ​ဆေးရုံတက်​နေစဉ် သီရိ​ခေတ်မှာ မကြာခဏ လာ​လေ့ရှိသည်။မယ်​တော်ဆန်ဝမ် တလပတ်နှင့်​တွေ့ကာ မယ်​တော်က သား​တော်ဘူမိဗလနှင့် ပို၍ရင်းနီးရန် အနီးအနားတွင် ​ကျောင်း​ပြောင်းတက်ရန် ​မေးခဲ့သည်။၁၉၄၉ခုနှစ် ဇူလိုင်၁၉ရက်​နေ့တွင် တိတ်ဆိတ်စွာ ​စေ့စပ်ခဲ့ကြပြီး ဘိသိတ်မခံမီ တစ်ပတ်အလို ၁၉၅၀ခုနှစ် ဧပြီ၂၈ရက်​နေ့တွင် ထိမ်းမြားခဲ့ကြသည်။သူတို့၏ လက်ထပ်ပွဲကို နယူး​ယောခ့်တိုင်းမ်သတင်းစာက ဆင်နှင့် ထီးဖြူ​မြေမှ အရိုးရှင်းဆုံး လက်ထပ်ပွဲဟု ​ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဘူမိဗလဘုရင်နှင့် မိဖုရားသီရိ​ခေတ်တို့တွင် သားသမီး ​လေးပါးရှိသည်။
​တော်ဝင်နန်း​တော်တွင် ဘူမိဗလဘုရင် ဘိသိတ်ခံယူ​နေပုံ
အချိန်​နှောင့်​​နှေးစွာ ကြာမြင့်ပြီးမှ ပြီးဆုံးသွား​သော အစ်ကို​တော် မဟီ​ဒေါဘုရင်၏ အသုဘအခမ်းအနားပြီး​နောက်တွင်ဘူမိဗလဘုရင်သည် ဘုရင်အဖြစ် ဘိသိတ်ခံယူခဲ့သည်။၁၉၅၀ခုနှစ် ​မေလ၅ရက်​နေ့တွင် ​တော်ဝင်နန်း​တော်ရှိ ဘိုင်ဆယ်သက်ဆင်ပလ္လင်ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။အခမ်းအနားတွင် ဘူမိဗလဘုရင်ကသူ့အ​နေဖြင့် ဆိုင်ယမ်ပြည်သူများ၏ အကျိုးနှင့် ​ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ​ဖြောင့်မတ်စွာ အုပ်ချုပ်သွားမည်("เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม")ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် နဝမရာမဘုရင် (King Rama IX) ခေါ်သော်လည်း ထိုင်းဘာသာတွင် ထိုကဲ့သို့ အသုံးမပြုပေ။ ထိုင်းလူမျိုး ပိုမိုအသုံးပြုသည့် အမည်သည် နိုင်လွမ်း (ในหลวง) သို့မဟုတ် ဖရားချောင်ယူဟွာ (พระเจ้าอยู่หัว- အမည်နှစ်မျိုးစလုံး မင်းဘုရင် သို့မဟုတ် ခေါင်းပေါ်မှာရှိသည့်သခင်)၊ ချောင်းချီဝစ် (ဘဝသခင်) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဥပဒေအရ ဘွဲ့အမည်သည် ဖရာဘတ် စုမ်းဒဂျ် ပါရာမင်းသာရ မဟာ ဘူမီဘော အဒူလျာဒက် (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ဖြစ်သည်။
ဘူမိဗလဘုရင်၏ ​တော်ဝင်မီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကျင်းပရာ ​နေရာ
၁၃.၁၀.၂၀၁၆ခုနှစ်က ​တော်ဝင်အိမ်​တော်များအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သည့် ဘုရင်ကြီး ​​ကံကုန်​ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်
ဘုရင်ကြီး ဘူမိဗလမှာ ၂၀၁၆ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက် ​ဒေသစံ​တော်ချိန် ည​နေ ၃နာရီ၅၂မိနစ်တွင် ဘန်​ကောက်မြို့၊ သီရိရတ်ချ်​ဆေးရုံ၌ ကံကုန်ခဲ့သည်။​နောက်တစ်​နေ့တွင် ကြွင်းကျန်​ရစ်​သော အ​လောင်း​တော်ကို ​တော်ဝင်နန်း​တော်သို့ ယာဉ်တန်းဖြင့်ပြန်လည် သယ်​ဆောင်ခဲ့ပြီး ဓ​လေ့အရ ​ရေချိုးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏ တစ်ဦးတည်း​သောသားဖြစ်သူ အိမ်​ရှေ့မင်းသား ဝသိလာ​လောင်ကွန်းမှ ​ပီးမန်းရတရာပလ္လင်ခန်းမတွင် ကျင်းပ​သော ​ရေချိုးခြင်းအခမ်းအနားကို ဦးစီး လုပ်​ဆောင်ခဲ့သည်။ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်ကာလကို တစ်နှစ်ကြာသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
​တော်ဝင်မီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာလတွင် ၅ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့သည်။ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိခဲ့​သော အမှန်တကယ် မီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ​အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၇ခုနှစ် ၂၆ရက်​နေ့ ည​နေပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်္ဂြိုဟ်အပြီး အကြွင်းအကျန်များနှင့် ပြာများကို ​တော်ဝင်နန်း​တော်ရှိမဟာဖဆတ်ပလ္လင်ခန်းမ၊ ​တော်ဝင်အုတ်ဂူများနှင့် ​တော်ဝင်ဘုရား တို့တွင် ထားရှိသည်။မြှပ်နှံအပြီးတွင် ဝမ်းနည်းခြင်းအချိန်ကာလကို ၂၀၁၇ခုနစ် ​အောက်တိုဘာလ၁၇ရက်​နေ့ ညသန်း​ခေါင်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ထိုင်းပြည်သူများသည် ပုံမှန်အ​ရောင်များအတိုင်း ပြန်လည်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီး ​၂၀၁၉ခုနှစ် ​မေလ ၄ရက်မှ၆ရက်တွင် ကျင်းပမည့် နောက်တက်လာမည့် ဘုရင်အသစ်၏ ဘိသိတ်ခံယူခြင်းကို ​စောင့်စား​နေခဲ့ကြသည်။ 
↑ Thailand’s King Bhumibol Adulyadej dies - The Hindu
↑ A Royal Occasion speeches။ Journal။ Worldhop (1996)။ 12 May 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5July 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Simon Mortland (20 January 2012)။ In Thailand, A Rare Peek at His Majesty's Balance Sheet။ Forbes။
↑ "The World's Richest Royals"၊ Forbes၊ 2010-07-07။
↑ The World's Richest Royals။ Forbes (29 April 2011)။
↑ Joshua Kurlantzick (24 January 2012)။ Forbes Looks into the King of Thailand's Wealth။ Council on Foreign Relations။3February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "Why Thailand's king is so revered"၊ BBC News၊ 2007-12-05။
↑ CNN၊ Jethro Mullen။ Thailand's King Bhumibol leaves hospital for seaside။ cnn.com။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Kanchanapisek
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ ၁၁.၃ (2012) King Bhumibol Adulyadej – A Life's Work. Editions Didier Millet. ISBN 9814260568။
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ ၁၂.၃ ၁၂.၄ ၁၂.၅ (2006) The King Never Smiles. Yale University Press. ISBN 0-300-10682-3။
↑ For an in-depth exploration of this theory, see Thailand's saddest secret (2013)။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named TelegraphObituary
↑ Bhirom Bhakdi၊ Soravij။ Queens of the Chakri Dynasty။ 14 July 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 August 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Making ofaMonarch။ Bangkok Post (5 December 2005)။ 15 July 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ The Royal Family။ Manora Company Limited Hua Hin။ 16 March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Royal Power Controversy။4January 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 'Anchœ̄n phrabǭrommasop phrabātsomdet phračhāoyūhūa nai phrabǭrommakōt khlư̄an khabūan siphā nālikā။ Wacharaphon (2016-10-14)။
↑ "Rituals inaRoyal's death" (in en)၊ The Nation။
↑ Thailand's King Bhumibol Adulyadej, world's longest-reigning monarch, dies။ Reuters (13 October 2016)။
↑ Thailand's King Bhumibol Adulyadej dead at 88။ BBC News (13 October 2016)။
↑ Thai Royal Burial Sites။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘူမိဗလအတုလျတေဇ&oldid=503108" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။